China Aluminium Aerial Working Platform vagadziri uye vanotengesa | YSXF
Yakagadzirwa nealuminium alloy, saka inorema chete chetatu zvakanyanya simbi isina simbi uye iron.
Injini dzinogona kuchengetedza inopfuura makumi matanhatu muzana yesimba radzo nekusimudza aluminium alloy inoshanda mapuratifomu mumhepo.
Iyo yemahara kubva kungura, kusvibiswa uye kushandiswazve.
Iyo yekumusoro-kukwirira kushanda chikuva chakagadzirwa uye chakagadziriswa nekambani yedu.Iyo inogadzira tekinoroji inoitwa nekuvandudza epamba zvigadzirwa.Iyo inogadzirwa nealuminium mbiri yekunamatira uye bhaudhi yekugadzirisa mamiriro.
Ine mudziyo unorema pazasi, uyo unozongoerekana warira kana mutoro uchidarika huremu hwakachengeteka, ichivandudza kuchengetedzwa kwechigadzirwa.
Cargo Anotakura Anosimudza Aluminium Alloy Platform
Sirivheri, Nhema kana sekukumbirwa
900 * 600 * 1100 / Yakagadzirirwa
Kwete / Oxidation
Yakakwirira simba, ngura kuramba, Chiedza uremu
Pashure: Aluminium Alloy Platen
Zvadaro: Aluminium chiwanikwa Guardrail
Chigadzirwa Nhanganyaya Ichi chigadzirwa ikambani yangu yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira kwemukati r & d timu yezvigadzirwa zvinoshanda, imwe yekushandiswa kukuru muboka re xugong, nemamwe mabhizinesi, yakahwina musika mukurumbira. Saizi uye chimiro zvinogona kugadziriswa zvinoenderana zvigadzirwa zvemotokari, zvinoderedza kuisirwa kwemamwe matambudziko akaomarara. Zvigadzirwa Zvemukati 1. Yemukati shandisa akasiyana siyana ekusimbisa chimiro, ichienzaniswa nemamwe mat ...
Aluminium alloy guardrail inowanzo shandiswa padivi kudzivirira matiraki, matrailer, uye mota dzeinjiniya, idzo dzinoita basa rekudzivirira, kukwira, uye runako; aluminium alloy guardrail ine huremu hwakareruka, kugadzikana kwakanaka, yakasimba oxidation kuramba, ngura kuramba, runako, uye kutakura-kutakura Uye kuomarara kunogona zvakare kusangana nezvinodiwa zvinodiwa; chimiro uye saizi inogona zvakare kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Zvigadzirwa Ratidza ...